Downlọ ọrụ jaketị Ndị Nwoke Ala / Ulo Okpu, Ndị Na-eweta Ya | Ndị na-emepụta jaket jaketị ndị na-eme China
Oge mgbụsị akwụkwọ na oge azụmaahịa ụmụ nwoke na-achụ nta, jaket owu owu 2113
Ihe ezumike nke azụmahịa kwesịrị ị paya ntị nke ọma na itinye akwa ndị ọkaibe, dịka iji akwa udiri ihe tozuru etozu, nwere ike ime uwe na nke azụmahịa na nke ezumike. Uwe eji arụ ọrụ dị elu na-ewu ewu na mkpa ndị ahịa, na-elekwasị anya na akwa na nkọwa ịchọ mma, ma na-akwalite ogo arụmọrụ nke ụdị. Iji mee ka ụdị dị mfe dị ka akara na mma nke ndị na-azụ ahịa ugbu a, ndị na-ese ihe na-etinyekwu uche na ojiji o ...
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke ụmụ nwoke na-eme ka ụdị ejiji dị iche iche jikọtara jaketị, jaket ejiri owu kpaa 216
Ojiji nke uwe uwe ụmụ nwoke na-echegbu ojiji nke agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba, n'ihi ikike mgbanwe dị ike ya na iji ohere, afọ ọ bụla aghọwo otu n'ime atụmatụ ndị na-ese ihe. Njirimara imepụta nke teknụzụ na-agbapụta agba agba n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri na-enye ngwaahịa ahụ ejiji ọhụrụ. Mpempe akwụkwọ na-egbusi agba agba na-eme ka mmasị na ọkwa dị otu ngwaahịa, na -emepụta otu ngwaahịa nke autu ...
Oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi oge ezumike nke ụmụ nwoke nwere mkpuchi mkpuchi ajị anụ mkpuchi, jaket eji ajị anụ emezi 206
Iji gboo mkpa nke ndị na-azụ ahịa, ndị na-emepụta ụlọ ọrụ anyị na-achụso ihe ọhụrụ na uwe nwoke, na-a attentiona ntị na mmelite nke nkọwa ndị mara mma, na-etinye ihe ndị ọzọ na-ewu ewu na ejiji ejiji, na-eme ka ngwaahịa ahụ rụchara arụ ọrụ, nke ọma na nke ejiji, na imepụta ihe ndị ọzọ. Uwe eji eji ejiji na udu mmiri nke udu mmiri. Na mgbanwe nke ndị na-azụ ahịa 'ịchọ mma na ịzụta ihe, ọ na-akwalite mmelite nke nkọwa dị mkpa na ndị na-eweta ọhụụ ọhụụ. Igodo ...
2021 mgbụsị akwụkwọ na oyi na-enwu gbaa agba ejiji na-emekarị ukporo ala jaket, jaket owu na 9268
Ka usoro ejiji na-aga n’ihu na-agbanwe, ndị na-ese ihe na-eleba anya na ejiji agba. Jiri agba dị iche iche jikwaa ụdị uwe dị iche iche.
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri nke ndị nwoke na-ekpo ọkụ kpuchie jaket, jaket owu 9220
Uwe a na-eji kpochapụ kpochapụla kpochapụ, nke na-enye mmetụta dị mfe ma na-emesapụ aka n'ozuzu ya. Ọmarịcha wiwi na-egosipụta ịdị mma dị mma. Styledị dị mfe gosipụtara ụdị kpochapụwo. Ọ nwere ogologo oge iyi dị ka jaket. Ihe bara uru ma baa uru maka ọtụtụ ndapụta. Na ịchụso nke mma, ọ dị mma n'oge oyi, ọ dịkwa mfe iji ejiji nke okomoko. Atọ-atọ tailoring, ala ngwe. Họrọ akwa di elu, jiri ihe omumu ...
2021 ohuru ohuru umuntakiri ndi nwoke, jaket owu owu 241
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị anọwo na-agbaso ụkpụrụ nke àgwà mbụ, a na-atụle ihe ọ bụla nke ngwaahịa ọ bụla ugboro ugboro, àgwà dị mma chọrọ naanị iji gosi ndị ahịa ngwaahịa dị elu. Versiondị kpochapụwo dị mfe ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa igbochi oyi, kamakwa ọ nwere ike izere mmetụta nke bloat,
Oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri ndị nwoke na-ebi akwụkwọ ogologo ala jaket, jaket owu 102
Ihe ndị a na-emeghị eme kwesịrị ị ofa ntị na iji akwa ọmarịcha, dị ka iji akwa tozuru etozu iji dochie akwa dị larịị.
2021 mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri oyi kpochapụwo ogologo jaket na-ekpo ọkụ, jaket owu 9013
Ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ anyị, site na imewe / akwa / usoro / uwe ụlọ nrụpụta, ndị otu ọkachamara na-emegharịkarị ya. Iji gbalịsie ike maka mma ka mma, mgbe ebupụsịrị ya, a ga-enwe ndị otu nyocha nyocha nke ndị ọkachamara iji nyochaa, naanị igosipụta ngwaahịa kacha mma. .
2021 mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri agba ọhụụ ụmụ nwoke na-acha ọkụ ọkụ jaket jaket 230
Agba mgbochi agba agba na-enweta nlebara anya oge niile site na ahịa ndị nwoke. Ngwakọta nke agba agba na-agbakwunye mmasị na oyi akwa na otu ngwaahịa. Na ijikọta mkpokọta nke agba agba iji mepụta ụdị uwe ọgbara ọhụrụ, Ihe nlere a na-eji isi ihe eji emepụta agba agba agba agba, na-enye otu ngwaahịa ọhụụ ọhụụ.
Oge mgbụsị akwụkwọ 2021 na udu mmiri kpuchitere jaketị na-ekpo ọkụ na ikuku na-enweghị mkpuchi, jaket owu 226
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ anyị ewepụtala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 nde ndị nwoke na ndị nwanyị, jaket owu, windbreakers, ndị otu na ụdị uwe ndị ọzọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ama ama na Russia, Turkey, na Ukraine.